Ezokuvakasha eTel Aviv | Izindaba Zokuhamba
Ezokuvakasha eTel Aviv
UMariela Carril | | Yini ongayibona, Tel Aviv
Ogwini lwaseMedithera lakwa-Israyeli kunedolobha lase Tel Aviv, eyesibili enabantu abaningi ezweni. Kusukela ngo-2003 yiGugu Lomhlaba Futhi yize isimo sezepolitiki singesona esikhanga kakhulu kwezokuvakasha kwa-Israyeli, iqiniso ukuthi lokhu akuvimbeli izinkulungwane zezivakashi ukuthi zifike minyaka yonke zizobona.
Ngaphandle kweJerusalema, iTel Aviv idolobha elifanele ukuvakashelwa. Ngakho-ke lapha sishiya imininingwane ethile mayelana okufanele ukwenze nokuthi yini ongayivakashela eTel Aviv.
2 Yini ongayivakashela eTel Aviv
3 Amahora angama-24 eTel Aviv
4 Izindlela zokuphunyuka eTel Aviv
Yasungulwa ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX futhi ukuhunyushwa kwegama layo kusuka esiHeberini ngu intaba yasentwasahlobo. Isikhathi esithile kwakuyinhloko-dolobha, okwesikhashana, futhi kwaqhunyiswa ngamabhomu yiGibhithe ne-Iraq empini yokugcina yaseGulf. Akulona kude neJerusalema, amakhilomitha angama-60 kuphela ezingama-90 kuphela ezivela eHaifa. Inamahlobo ashisayo nobusika obupholile.
Njengoba ngishilo ngenhla Iyisizinda Samagugu Omhlaba njengoba iqukethe iqembu elithakazelisa kakhulu lezakhiwo zeBauhaus. Kunezakhiwo ezinjengalezi emhlabeni wonke kepha akukho lapho ziningi njengaseTel Aviv, lapho isitayela sakhula ngawo-30 ngokufika kwamaJuda asuka eJalimane abalekela ukuzalwa kwamaNazi.
Yini ongayivakashela eTel Aviv
Hay izindawo ezinhlanu edolobheni: okuthiwa yiWhite City, iJaffa, iFloretin, iNeve Tzedek nolwandle. I-White City ngumkhakha oyiGugu Lomhlaba futhi uyithola phakathi komgwaqo u-Allenby Street no-Start no-Ibn Gvirol, uMfula iYarkon noLwandle iMedithera. Zonke izakhiwo zimhlophe, kunjalo, futhi zibuyiselwe ngokuhamba kwesikhathi.
Kufanele uzulazule eRothschild Boulevard, nezindawo zayo zokubeka ezinhle phakathi nendawo nezindawo zokudlela ezinhle nezitolo zayo ezipholile. Futhi ngakuSheinkin Street, okuwuphawu lweTel Aviv, nezitolo zayo zokuvuna, ubucwebe kanye nezindawo zokudlela ezinhle. Kungumakhelwane obalulekile.
I-Jaffa iseningizimu yeTel Aviv futhi iyi- itheku elidala ukuthi ngesikhathi sikhule. Iyathandeka emoyeni wayo wakudala, ezimakethe zayo ezikhungathekisayo, imigwaqo yayo kanye naleyo nhlanganisela engenakuphikwa yamasiko amaJuda nama-Arabhu. Itheku liyindawo enhle enezikebhe zalo ezincane nezindawo zokudlela nezindawo zokudlela ezinhle kanye nemakethe yalo kanye nemibono ekude neTel Aviv.
UFloretin kubuye kube ngaseningizimu futhi kungaba yinto efana nayo ISoho eTel Aviv. Yindawo yakudala okuthi, yize iguqukile ngokuhamba kwesikhathi, ayikashintshi kangako ngakho-ke ikhethekile. Kuyingxenye empofu futhi kufanele uma ufuna ukubona umehluko. Ungadabula iMakethe yaseLevinsky, nemikhiqizo yayo yaseGrisi, eTurkey naseRomania, futhi uma uchitha ubusuku kunemigoqo eshibhile futhi abantu abavela enkabeni bavame ukuza.
UNeve Tzedek ingenye ye izifunda ezindala kakhulu zeTel Aviv kepha ngasikhathi sinye ibe semfashinini kakhulu futhi ibuyiselwe impela. Kusuka ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX futhi bekuyindawo yokuqala yamaJuda ngaphandle kwaseJaffa. Inemigwaqo emincane, izakhiwo eziningi zasempumalanga, imipheme, izitolo, izitolo zabadwebi nezindawo zokudlela ezinama-patio anomthunzi lapho kufaneleka khona ukuphuza isiphuzo.
Ekugcineni, kukhona Ucingo lwe-tel aviv ecindezelwe amamayela maqondana nogu olusentshonalanga yedolobha. Ikona elinye lamabhishi amade kakhulu aseMedithera kanti ehlobo kugcwala ikakhulukazi izivakashi nabantu bendawo abeza ukuzosizakala ngamanzi alo afudumele. Ukuba banzi kangaka kunendawo yawo wonke umuntu. Ngisho nolwandle lwaseHilton Hotel lwaziwa ngokuba yindawo enhle kakhulu yezitabane futhi nolwandle lwaseGordon-Frishman luyindawo yemfashini yokuhlangana. Kukhona neBanana Beach, iDolphinarium ne-Alma Beach.
Amahora angama-24 eTel Aviv
Ngabe useJerusalema futhi ufuna ukuzimela ngeTel Aviv? Ngakho-ke kufanele uzihlelele kancane, uphume kusenesikhathi futhi usizakale. Uma uya ehlobo uzosebenzisa amahora ambalwa ogwini ukuze uqale eJaffa ukujabulela itheku, udle isidlo sasekuseni ngasolwandle uthathe uhambo lokuhambahamba. UNeve Tzedek ungomakhelwane ukuze ukwazi ukuyifaka ohambweni futhi udle isidlo sasemini lapho.
Ntambama ungakhetha phakathi kokujabulela ulwandle noma ukuvakashela okukodwa kokuningi iminyuziyamu iTel Aviv enayo: Museum of the Jewish People, Museum of the Land of Israel, ngokuyisisekelo imnyuziyamu yemivubukulo, Umnyuziyamu waseBauhaus (Qaphela ukuthi kuvulwe izinsuku ezimbili kuphela ngesonto, ngoLwesithathu nangoLwesihlanu) ,, iTel Aviv History Museum, i-Azrieli Observatory lapho ungabona khona idolobha namakhilomitha angama-50 ogwini lolwandle, nayo imahhala! iminyuziyamu enikelwe kubuntu obubalulekile noma kwezobuciko.
Futhi ebusuku idolobha line- impilo enhle ebusuku okuhlala njalo ekuseni. Ungaya esidlweni sakusihlwa bese uyophuma uyodansa noma endaweni yokucima ukoma kwazise lezi zindawo zigcwala phakathi kwamabili kuphela.
Izindlela zokuphunyuka eTel Aviv
Uma uzohlala ubusuku obubodwa eTel Aviv ungasebenzisa usuku lwesibili okufanele ulwenze ukuhamba ngosuku, ukuphunyuka. IMasada kimi wuhambo lokuqala olungaphuthelwa. Uma uneminyaka engaphezu kwengu-40, ungakhumbula isithombe saseHollywood esibizwa ngokuthi iMasada
Leli yigama lamanxiwa enqaba nezigodlo zasogwadule, entabeni, elamelana nokuhlaselwa kwamaRoma isikhathi eside, ekugcineni lahlulwa futhi abasindile kulo bazibulala abaningi, yingakho bethathwa njengabafel 'ukholo. Kubuye futhi Amagugu Omhlaba.
Ungavakashela iMasada bese wenza i- Uhambo loLwandle Olufile ngasikhathi sinye, isibonelo. Ungangeza futhi ukuvakasha ku- I-Ein Gedi oasis, hamba izintaba futhi uhlanganyele ebhishi langasese loLwandle Olufile. Noma, vakashela uPetra, eJordani elingumakhelwane. Noma kunjalo, lokhu kufaka nohambo lwendiza. Nawe ungakwenza vakashela iCaesaea neGalile, uma unesithakazelo kuleli cala lakamuva umlando weBhayibheli ngoba ukuvakasha kufaka nokuvakashelwa INazaretha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Tel Aviv » Ezokuvakasha eTel Aviv
Yini ongayivakashela eVeracruz, eMexico
The Zorrilla Train, indlela ehlukile yokuthola iValladolid